အထီးကြွက်များတွင်လိင်အပြုအမူအတွက် ghrelin အချက်ပြမှု၏အခန်းကဏ္ 2014 (၂၀၁၅) - သင်၏ ဦး နှောက်အမြှေးပါး
အထီးကြွက်များတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများအတွက် ghrelin အချက်ပြ၏အခန်းကဏ္ဍကို (2014)
စှဲလမျးသူ Biol ။ 2014 ဒီဇင်ဘာ4။ Doi: 10.1111 / adb.12202 ။
Egecioglu E ကို1, Prieto-Garcia က L ကို, Studer E ကို, Westberg L ကို, Jerlhag E ကို.
Ghrelin တစ်အူ-ဦးနှောက် signal ကို, ကောင်းစွာ hypothalamic ghrelin receptors (GHS-R1A) ကနေတဆင့်ဗွေဆော်စွမ်းအင် homeostasis, အစားအစာစားသုံးမှုနှင့်အစာစားချင်စိတ်ကိုထိန်းညှိဖို့လူသိများသည်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, ghrelin, ဦးနှောက်အတွက်ဆုလာဘ်စနစ်များကိုမြှင့်လုပ်ဆောင်အမည်ရသည့် mesolimbic dopamine စနစ်, နှင့်ဖြင့်အရေးပါတယ်လို့အစားအစာများ၏အကြိုးစွဲလမ်းမူးယစ်ဆေးဂုဏ်သတ္တိများအဖြစ်ထိန်းညှိ။ အဆိုပါ mesolimbic dopamine စနစ်ကထိုကဲ့သို့သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအဖြစ်စွဲလမ်းမူးယစ်ဆေးဝါးများနှင့်သဘာဆုလာဘ်တွေရဲ့အားဖြည့်ဂုဏ်သတ္တိများ, ကိုပြဌာန်းပေးသောကျနော်တို့ ghrelin အထီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများအတွက်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍသောပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှုများများအတွက်ဘာသာရပ် hypothesize.
ဤနေရာတွင်ကျွန်တော်အထီးကြွက်တွေမှာ (ထို GHSR-1A ရန် JMV2959 သုံးပြီး) pharmacological ဖိနှိပ်မှုဒါမှမဟုတ် GHS-R1A ၏မျိုးဗီဇကိုပယ်ဖျက်သော်လည်း, ထို ghrelin ကုသမှုတိုးပြသ oestrus အတွက်အမျိုးသမီးကြွက်နှင့်အတူလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအဖြစ်များအတွက်လိင်ကိစ္စလှုံ့ဆျောမှုလျော့နည်းစေပါသည်။ ကြိုတင် JMV2959 နှင့်အတူကုသမှု L-dopa (က dopamine ရှေ့ပြေး) နဲ့ pre-ကုသမှုသိသိသာသာမော်တော်ယာဉ်ကုသမှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်အမျိုးသမီး mouse ကိုများအတွက် preference ကိုတိုးမြှင့်ခဲ့သည်။ ဆန့်ကျင်တွင်, JMV5 နှင့်အတူကြိုတင်ကုသမှု 2959-hydroxythyptohan (serotonin များအတွက်ရှေ့ပြေး) နဲ့ကုသမှုမော်တော်ယာဉ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်လိင်လှုံ့ဆျောမှုလျော့နည်းသွားသည်။ သီးခြားစမ်းသပ်မှုတွေမှာတော့ကျနော်တို့အန်ဒရိုဂျင်-မှီခိုအိပ်ယာစမ်းသပ်တိုင်းတာအဖြစ် ghrelin နှင့် GHS-R1A ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ခြင်းအမျိုးသမီးအိပ်ယာကျော်ကြာအောင်အချိန်ကိုအကျိုးသက်ရောက်စေမပြပါ။ စုပေါင်းအဲဒီဒေတာငတ်မွတ်ခေါင်းပါးမှုဟော်မုန်း ghrelin နှင့်၎င်း၏အဲဒီ receptor အထီးကြွက်တွေမှာပုံမှန်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအပေါ် ghrelin အချက်ပြစနစ်၏ဆိုးကျိုးများ dopamine neurotransmission ပါဝင်ကြောင်းလိုအပ်သည်ဖော်ပြသည်။
စွဲ; အစာစားချင်စိတ်; dopamine, ghrelin; ဆုလာဘ်; လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ